Free online encyclopedia. Did you know? page 397
ဆိုင်းကန်ရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်
ဆိုင်းခေါင် (လုံဂျာ)ရွာ၊ မူဆယ်မြို့နယ်
ဆီခပ် (၁)ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်
ဆီခပ် (၂)ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်
ဆီခူးရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်
ဆီဆုံ (နောက်)ရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်
ဆီတန် (အထက်)ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်
ဆီတန် (အောက်)ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်
ဆီပါဆိုင် (ဂေါကြာဆိုင်)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်
ဆီပါဆိုင် (ဆောင်ကြာဆိုင်)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်
ဆီပါဆိုင် (ရွာဟောင်း)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်
ဆီပါဆိုင် (လားဟူ)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်
ဆီပါဆိုင် (အောက်)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်
ဆီအောရွာ၊ လောက်ကိုင် (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်
ဆမ်ဆိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အသုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၂၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အသုံးတော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၅၉ ဦး၊ မ ၁၃၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၅၁ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆမ်ဆိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဟိုင်းနားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၃၇၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုင်းနားကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၃၇ ဦး၊ မ ၄၂၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၈၂၃ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆမ်ပူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ နောင်ရှင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၄၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်ရှင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၇၄ ဦး၊ မ ၅၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၀၉ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆမ်ဘမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းနင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၇၈၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၂၀ ဦး၊ မ ၁၅၅၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၇၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ...
ဆယ်ဟိန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်ကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၃၄၁ ဖြစ်သည်။
ဆယ်ဟီရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ဆယ်ဟီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆယ်ဟီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၀၀ ဦး၊ မ ၁၀၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၀၃ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆရာအေးကုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ငုက္ခလေးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၆၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ငုက္ခလေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၆၅ ဦး၊ မ ၁၃၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၉၅ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆလာဘိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၈၆၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၇၅ ဦး၊ မ ၁၂၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၅၃ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆလာဝမ်မိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၇၁၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဖန်မင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၁၄ ဦး၊ မ ၄၇၉၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၇၁၃ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆလားရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်
ဆလားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ ဆလားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၄၅၁ ဖြစ်သည်။
ဆလိုင်းခုံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ဝမ်ထီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၃၆၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ထီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၄၃ ဦး၊ မ ၈၅၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၉၄ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆလုံ (တောင်)ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
ဆလုံ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ လုံးပျဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၃၈၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုံးပျဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၉၉၈ ဦး၊ မ ၆၁၂၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၁၂ ...
ဆလုံ (မြောက်)ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်
ဆလုံ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ လုံးပျဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၃၈၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုံးပျဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၉၉၈ ဦး၊ မ ၆၁၂၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၁၂ ...
ဆဝန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ ကောင်းလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၂၁၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းလုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၅၁ ဦး၊ မ ၂၃၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၈၈ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆဝပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ နမ့်လစ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၇၆၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်လစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၀၈၂ ဦး၊ မ ၂၉၈၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၀၆၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ ...
ဆဟန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၁၇ ဦး၊ မ ၂၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၅၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆဟောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ဆဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၂၅၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆဟောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၀၄ ဦး၊ မ ၆၂၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၁၀၀ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆာထုန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ မာလီလင့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၅၈၂ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဆာရီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းမော-ဝအထူးဒေသ ၊ ကောင်မင်ဆန်းမြို့နယ်၊ မွေ ခတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၅၆၄၀ ဖြစ်သည်။
ဆာလားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၈၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းလွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၁၇ ဦး၊ မ ၂၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၅၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆာလုန် (လားဟူ)ရွာ၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်
ဆာလုန် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၁၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၉၂ ဦး၊ မ ၁၆၄၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆာလုန် (အာခါ)ရွာ၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်
ဆာလုန် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၉၂ ဦး၊ မ ၁၆၄၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၃၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆာလူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဆာလူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၃၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆာလူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၉၁ ဦး၊ မ ၉၉၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၈၁ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆာလူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ ဆိုင်းလိန် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၉၆၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိုင်းလိန် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၁၆ ဦး၊ မ ၂၁၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၃ ...
ဆားကောရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၈၂၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၄၁ ဦး၊ မ ၄၀၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည ...
ဆားတောရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ တုံလောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၆၄၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တုံလောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၂၃ ဦး၊ မ ၂၄၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၂၈ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆားပြားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ တောင်ကွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၅၀၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တောင်ကွဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၁၈ ဦး၊ မ ၁၀၂၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၄၁ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆားပြားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ နန်းနိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၄၆၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နန်းနိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၃၅ ဦး၊ မ ၁၂၆၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆားလုကောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ဆားလုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၉၃၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆားလုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၂ ဦး၊ မ ၁၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၇၉ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆားလုမိုင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ဆားလုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၉၄၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆားလုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၂ ဦး၊ မ ၁၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၇၉ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆားဝါးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ ဆားဝါကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၆၁၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆားဝါကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၃၁ ဦး၊ မ ၂၄၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၇၅ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသ ...
ဆိတ်ဆော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ်၊ ပါခါးလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၇၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပါခါးလုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၉ ဦး၊ မ ၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၈ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...
ဆိန်ခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ နားဖန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၄၅၉ ဖြစ်သည်။
ဆိပ်နားရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မန်ပိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၇၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ပိန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၀ ဦး၊ မ ၇၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၇၉ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိပ်ဖူးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ်၊ ဆိပ်ဖူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၇၄၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိပ်ဖူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၅ ဦး၊ မ ၅၈၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၆၅ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုက်ကျော့ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နမ်ခမ်းဝူးမြို့နယ်၊ ယောင် လုပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၆၅၀ ဖြစ်သည်။
ဆိုက်ခေါင်ကျဒေါ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ တန့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၇၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တန့်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၀၈ ဦး၊ မ ၁၄၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၈၆ ဦးနေထို ...
ဆိုက်ခေါင်ဈေးကုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၃၁၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၇၇၀ ဦး၊ မ ၁၂၈၈၄ ဦး၊ လူဦးရ ...
ဆိုက်ခေါင်ထီတပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၂၈၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၇၇၀ ဦး၊ မ ၁၂၈၈၄ ဦး၊ လူဦးရေ စ ...
ဆိုက်ခေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၃၈၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၉ ဦး၊ မ ၉၁၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၇ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုက်ခေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၅၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၉၃၂ ဦး၊ မ ၈၂၀၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၁၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုက်ဖြေ (ဟန်ပုံး)ရွာ၊ မိုးနဲမြို့နယ်
ဆိုက်ဖြေ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ မိုးနဲမြို့နယ်၊ မိုင်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၂၅၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၇၄ ဦး၊ မ ၂၁၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၇၉ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုင်ကပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ နောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၁၉၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၃၂၆ ဦး၊ မ ၃၅၂၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၈၅၂ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုင်ကိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၁၂၃၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၄၁၀ ဦး၊ မ ၂၅၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄ ...
ဆိုင်ကောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၉၂၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်ပုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၀၈ ဦး၊ မ ၄၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၁၀ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုင်ကျောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ နမ့်စလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၄၆၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်စလပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၂၅၅ ဦး၊ မ ၂၉၃၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၁၉၃ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုင်ကျောက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ ကောင်းဝိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၃၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းဝိန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၇၅ ဦး၊ မ ၈၈၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၀ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုင်ခေါင်ကော်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ တောညုနမ့်ခမ်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၉၇၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တောညုနမ့်ခမ်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၀၁ ဦး၊ မ ၆၇၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၇၄ ...
ဆိုင်ခေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းကိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၂၄၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းကိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၂၇ ဦး၊ မ ၃၈၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၁၆ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆိုင်ခေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းဟဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၉၉၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းဟဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၇၂ ဦး၊ မ ၉၉၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၆၃ ဦးနေထိုင်သည်။
ဆီပါဆိုင် (ဂေါကြာဆိုင်)ရွာ၊ ဟိုပန်မြိ ..
ဆီပါဆိုင် (ဆောင်ကြာဆိုင်)ရွာ၊ ဟိုပန်မ ..